विराटनगरमा एन आई सी एशिया बैंकले खोल्यो तीन नयाँ शाखा - Lokpath Lokpath
२५ भाद्र २०७६, बुधबार १७:३२
विराटनगरमा एन आई सी एशिया बैंकले खोल्यो तीन नयाँ शाखा
प्रकाशित मिति : २५ भाद्र २०७६, बुधबार १७:३२
काठमाडौं । बिगतका केही वर्षयता एन आई सी एशिया बैंकले आफ्नो विस्तार व्यापक गरेको छ । ग्रामीण तथा दुर्गम स्थानहरु साथै शहरी क्षेत्रमा समेत आफ्नो उपस्थितिलाई थप दरिलो बनाउने क्रममा एन आई सी एशिया बैंकले विराटनगरमा नयाँ तीन शाखा खोलि भाद्र २५ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
करिब १८ लाख ग्राहकहरूका साथ सञ्चालनमा रहेको यस बैंकका प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरु अत्यन्त उत्साहप्रद रहेका छन् ।
मोरङ जिल्ला, विराटनगर मेनरोडस्थित विराटनगर मेनरोड शाखा र रोडशेषस्थित रोडशेष शाखाको समुद्घाटन विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले समुद्घाटन गर्नुभयोे । त्यस्तैगरी विराटनगर हाटखोलास्थित हाटखोला शाखाको समुद्घाटन मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले गर्नुभयो ।
यी शाखा विस्तारसँगै बैंकका आदरणीय ग्राहक महानुभावहरुले आफूलाई पायक पर्ने शाखाबाट बैंकको सेवा प्राप्त गर्न थप सहज हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले उत्पादनशील गतिविधि तथा निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाएको
काठमाडौं । आइतबार शेयर बजारले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । नेप्से परिसूचक
काठमाडौं । “बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि” भन्ने मूल नाराका
गरिब जनताको बीमाको प्रिमियम तिर्न सरकारले सहयोग गर्छ: अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ५३औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज